Umthandazo wokutsala indoda. ? Khawuleza kunye nengqondo.
Umthandazo ukutsala indoda Ingagxekwa kakhulu kodwa iyasebenza kwaye inamandla.
Ngumthandazo awenzelwe ukuba wenziwe ngabasetyhini kuphela, nangona ingabo abasebenzisa esi sixhobo kakhulu ukulwela olo thando ubudlelwane olufuna ukungenelela kukaThixo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba akukho mfuneko yokulindela ukuba ubudlelwane buyehlakele ngokupheleleyo kuwo wonke ukwenza lo mthandazo kodwa kunokwenziwa kwiimpawu zokuqala zokuba izinto azihambi kakuhle.
1 Umthandazo ukutsala indoda ekhawulezayo
2 Umthandazo wokuba uthandane nendoda enengqondo
3 Umthandazo wokuphelelwa yithemba kwimizuzwana
3.1 Uyintoni lo mthandazo?
3.2 Ngaba ndingatsho yonke imithandazo?
Umthandazo ukutsala indoda ekhawulezayo
«UMoya oyiNgcwele, wena ongaphezulu kokwazi nawuphi na umntu owaziyo amandla omphefumlo wam ...
Ndicela ukuba usimamele isicelo sam, ukuba ngamandla akho undisondeze (igama lomntu othandekayo), ukuba loo mntu uve onke amandla am kwaye uwa phambi kwabo, ndiyakucela, Thixo Oyingcwele ukuba ugobe ukuthanda kwakhe kunye nomnqweno wakhe yiba ecaleni kwam
Jonga kum kwaye uve lonke uthando lwam kunye nokuzinikela kuye.
Sithandwa sikaMoya oyiNgcwele, umlawuli wemiphefumlo, ndiyakucela ukuba uze kum, ndicela uncedo lwakho olushushu lokuphendula umthandazo wam ...
Ndiyakucela ukuba uthando lwakhe alusenamdla kum, ukuba angandiphephi, ukuba uhlala ekulungele ukuthetha nam, ukuba amandla ayenzela mna kuphela ...
Ndiyakucela, ngamana le ndoda ekuthandayo iza kum kwaye amandla ethu angangawodwa, amandla akho angangomntu odibana nam nala ndoda ndiyithandayo kakhulu.
Ukukhululwa kukaMoya wam oyiNgcwele oyiNgcwele endithandayo, ndinike amandla afunekayo ukuze loo mntu andithande, uyazi imiphefumlo yethu kwaye namhlanje lixesha lokuba uzihlanganise ...
Ndiyakuthembisa ngentliziyo yam ukuba uza kumthanda, lowo (umntu othandekayo) uyakuhlala onwabile nam, ukuba akusokuze kubekho ngokwaneleyo okanye lusizi entliziyweni yakhe ukuba kuxhomekeke kum.
Namhlanje umoya oyingcwele ndikucela ngentumekelelo enkulu ngothando lwakho kunye nenkampani yakho. Amen "
Iminqweno yethu kufuneka ukuba ibe ngamandla angaphakathi akhokelela kuthi ukuba sibuze ngokunzulu ngento evutha njengelangatye eliphilayo ngaphakathi kuthi.
Lowo loo mntu ubuye ngokukhawuleza Kithi iqinisekisa ukuba iimvakalelo zaloo mntu zingasindiswa ngendlela elula kuba asimnikanga xesha lokuba intliziyo yakhe ibe nongcoliseko neearhente ezinokuthi zithintele okanye zithintele injongo esiyinqwenelayo.
Ayisiyonjongo okanye ngumnqweno ozelwe kukuzingca kodwa imalunga nokuhlangula ikhaya, usapho, ubudlelwane obusemngciphekweni wokuphela ngonaphakade.
Ukuba omnye waba bantu usafuna olu lwalamko ukuba luqhubeke, yonke into inokwenzeka.
Umthandazo wokuba uthandane nendoda enengqondo
«Ixesha lothando luphezu kwethu.
Intliziyo ivusa kwakhona ndibanga ilungelo lam lobuzibulo kwaye ndithatha icala nokuzithemba kwam, amandla am endawo okwazi ukuthanda kunye nokuphila ekwamkelweni luthando.
Ndikhe ndanengxaki nothando ngaphambili.
Intliziyo yam ibibuhlungu. Ndikhe ndindedwa, ndinomsindo, ndingonwabanga, ndilusizi kwaye ndikhathazekile.
Bendihlala ndikholelwa ukuba akunakwenzeka ukufumana uthando lwenene, oluhlala luhleli noluchukumisayo.
Kodwa ndikhetha ukunyanga le ngoku.
Ndikhetha uthando kwaye ndikhetha ukufumana uthando lwam lokwenyani.
Ndenza ukhetho olutsha lokuphinda ndibone ubumsulwa bentliziyo yam kwaye ndiphinde ndixhumane nothando olunzulu nolushukumisayo.
Ngamaxesha apho sithandabuza khona ii-charms zethu okanye phi asinxibelelani ngokwasemzimbeni nale ndoda Singawenza lo mthandazo unamandla ukuze ngonxibelelwano lwengqondo okanye lokomoya ukuba iimvakalelo zothando ziqale ukukhula.
Ingasebenza nakwezabo ubudlelwane kude, ukugcina ingqondo yale ndoda ihlala icinga ngathi inokusinceda kakhulu kwaye isenokumenza ukuba angabinathemba lothando.
Umthandazo wokuphelelwa yithemba kwimizuzwana
«Umoya onamandla ongenazigqibo, ndiyakucela namhlanje ukuba undincede, ukuphelelwa lithemba kube ngumoya, namhlanje ndiyakucela, umoya kaDon Juan da Conquista uze kundinceda, umoya wothando, yiza kum, umoya kaSanta John ummbiwa wasemgodini, ubaleke ukundinceda, umoya onamandla wemimoya emine, iindlela kunye neendawo.
Unamandla kunye nomoya olungileyo weSanta oMnombo kaLeon, onamandla kunye nomsindo oNgcwele uMarta, Umoya wobuPolo weSanta Helena Usuka eYerusalem.
Umoya woMsindisi oNgcwele waseHorta, Umoya kaMariya oyiNtloko, umoya oxhasayo woMsindisi waseHorta, imimoya egcwele ukulunga kunye nobubele, namhlanje ndicela uncedo lwakho, ndiyakucela ndikuyalele ukuba undincede.
Mnumzana weemvakalelo ezintlanu, iingcinga zomgwebo, intando kunye nomoya ophilayo, namhlanje ndiza kukubuza, ukuba undincedise enkosi: (igama lomntu) Ndicela iyingcwele yanamhlanje.
Ndicela i-saint yosuku azalwa ngalo lo mntu kunye nosuku lomntu azalwe ngalo.
Ingelosi endigada nayo, kwingelosi yakhe egada.
Ndenza ikhandlela ukuze engqondweni yakhe akukho nto ingandibandakanyi, ukuba umzimba wakhe uyandidinga, ukuba ilungu lakhe lesini kuphela elinovuyo kunye nam, ukuba intloko yakhe icinga ngam kuphela, ukuba izandla zakhe zifuna nje ukuchukumisa umzimba wam, iinyawo zifuna ukuhamba nje kum, ukuba ingcinga yakho, umgwebo kunye nentando yakho, iya kuba yeyam kuphela.
Ndinike imimoya yamandla okwenza ukuthanda kwakhe, (igama lomntu) ndicinga kuphela kum, ndifuna mna kwaye ndifuna yena kuphela, okanye abangcwele ndimcela nje ukuba andincede andinike uthando kuba ndifanele. "
Lo ngumthandazo ekufuneka wenziwe ngendlela efanelekileyo kwaye uyazi ukuba ngumbandela onobuzaza esizakuwubuza.
Unqwenela umntu kwaye ukuyifezekisa kwimizuzwana nje efuna ukuba sibeke onke amandla ethu kwinto esiyicelayo kwaye, okona kubaluleke kakhulu, kukuba sicela ukuba sazi ukuba into esiyifunayo inokufumaneka kuphela ngokwenza lo mthandazo.
Ukholo lunamandla, kuba luxhomekeke ekusebenzeni koku kunye yonke imithandazo ukuba asinakwenza nantoni na esiyicelayo.
Imithandazo yokuphelelwa lithemba yindoda kwimizuzwana ukuba bayasebenza kwaye banamandla amakhulu.
Ayithethi ngomlingo okanye nasiphi na isiqalekiso esisetyenzisiweyo, kwaye asifuni kulawula isazela somnye umntu ngokukulungela kwethu, into esiyicelayo kukuba le ndoda ibone zonke iimpawu esinazo kwaye iphambukele kuba nathi.
Lo kunye nayo yonke eminye imithandazo ikhonza izinto ezininzi, enye yazo kwihlabathi liphela kukugcina ukholo lwethu luphilile.
Kule meko ethile sinokuba nezicelo ezizodwa.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba singawenza lo mthandazo kwizinto ezingaphandle njengendalo yonke okanye uThixo othile kodwa singayenza nakuthi, kubuntu bethu bangaphakathi.
Into ebalulekileyo kukufumana unxibelelwano olukhethekileyo kunye el mundo yokomoya apho kulwelwa khona amadabi okwenyani.
Singalucela ke ubudlelwane bethu bothando, kuba le ndoda isishiyileyo kwaye engafuni ukubuyela, singacela uthando ukuba luzalwe ngokutsha entliziyweni yakhe kwaye ifune ukubuyela kweli khaya alilahlileyo.
Ewe, yonke imithandazo esiyifunayo itsalela amandla kwaye icoca imeko yokomoya esijikelezayo.
Esi sisibonelelo esinokuthi siqale ukuzonwabisa ukusukela oko siqalayo ukwenza imithandazo yethu.
Kuyacetyiswa ukuba sithandaze imihla ngemihla kwaye sikwenze ukusuka ezinzulwini zomphefumlo, silandela umthandazo okhethekileyo okanye sisebenzise awethu amazwi kunye nokholo olukhulu.
Yiba nokholo emthandazweni ekutsaleni uthando lwendoda.